Sodina & Tube Laser Cutting Machine
Metal Plate Ary Tube Laser Cutting Machine
Arm alalan'ny milina azo baikoina 3D Laser nandidy sy Welding Machine
Metal & Non-vy Laser Cutting Machine
Laser laser ao amin'ny Tube China 2020
2020 dia taona miavaka ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny vokan'ny COVID-19 saika tamin'ny fianan'ny olona rehetra. Izy io dia mitondra fanamby lehibe amin'ny fomba varotra nentim-paharazana, indrindra ny fampirantiana globale. Ny antony COVID-19, Golden Laser dia tsy maintsy manafoana ny drafitra fampirantiana amin'ny taona 2020. Ny Lukly Tube China 2020 dia afaka mitazona fotoana ara-potoana any Shina. Ao amin'ity fampirantiana ity, Golden Laser dia naneho ny NEWSET avo lenta farany cnc automatique fantsom-pamokarana laser P2060A, manokana izany ...
Ny EMO amin'ny maha World Trade Fair an'ny Machine Tools and Metalworking dia atao mifandimby any Hanover sy Milan. Ireo mpampiranty iraisam-pirenena dia eo amin'ity tsenambarotra ity, ireo fitaovana, vokatra ary fampiharana farany. Lahateny sy seha-pifanakalozan-kevitra marobe ampiasaina hanakalozam-baovao eo amin'ny mpanamboatra sy ny mpampiasa. Ity fampirantiana ity dia ny forum hahazoana mpanjifa vaovao. Ny foara ara-barotra voalohany, EMO Hannover, karakarain'ny Alemanina Machi ...
Tonga lafatra amin'ny fivoahana ny avy Golden Vtop Laser JM2019 Qingdao International Machine Fitaovana Exhibition
Ny fampiratiana Qingdao International Machine Tool Exhibition faha-22 dia natao tao amin'ny Centre Expo International Qingdao tamin'ny 18 ka hatramin'ny 22 Jolay 2019. Mpanamboatra an'arivony maro no nivory tao Qingdao tsara tarehy mba hiara-manoratra hetsika mahafinaritra momba ny teknolojia mainty sy mainty. JM JINNUO Machine Tool Exhibition dia notontosaina tamim-pahombiazana nandritra ny 21 taona misesy hatramin'ny nanombohany. Atao ao Shandong, Jinan ny volana martsa, Ningbo amin'ny Mey, Qingdao amin'ny volana Aogositra ary She ...
Golden Laser & MTA i Vietnam 2019
Laser laser an'ny laser ao Melbourne Australia
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2019, ny drafitra paikady fanovana sy fanavaozana ny fizarazaran'ny laser an'ny Goldenlaser dia notanterahina. Voalohany, manomboka amin'ny fampiharana indostrialy ny milina fanapahana laser fibre izy io, ary mamadika ny vondrona mpampiasa indostrialy avy any amin'ny farany ambany ka hatramin'ny farany ambony amin'ny alàlan'ny fizarazaran-tany, ary avy eo mankany amin'ny fampivelarana ny fitaovana sy ny fanavaozana ny fitaovana sy ny rindrambaiko. Farany, araka ny filazan'ny globa ...